အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: သက်တံ့တွေရဲ့ အဆုံးမှာ အခန်း (၁)
ဧပရယ်လ ၈ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့မှာ ငါ့ရဲ့ ၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကို အိမ်မှာ လုပ်မယ်။ နင်လာဖို့ဖိတ်တာပါ။ ငါတို့ မျက်လှည့်ဆရာ ခေါ်ထားတယ်။ အိမ်ကို နင် ၂ နာရီလောက်အရောက်လာပေါ့။ ၅ နာရီလောက်ဆိုပြီးမယ်ထင်တယ်။ နင်လာလိမ့်မယ်လို့ ငါထင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မှာလုပ်မယ့် နင့်ရဲ့မွေးနေ့ကို ငါလာခဲ့မယ်။
ငါ့ရဲ့မွေးနေ့ ပါတီက အင်္ဂါနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ နင် ပါတီိကိုလာတဲ့အခါ စန်ဒီ ကို ခေါ်မလာနဲ့လို့ မေမေက ပြောခိုင်းတယ်။ အဲဒီခွေးမလေးက သိပ်နံတာပဲ။
နင့် အမေ ငတုံးမကြီး ဗာ ပြောပြော ငါဂရုမစိုက်ဘူး။ စန်ဒီ ကလဲ ပွဲကို လာချင်တယ်။
ငါ့အမေ က မတုံးဘူး။ နင်သာ “ငတုံး”။ နင့်ခွေးမကို ခေါ်လာ ဂွင့် မရှိဘူး။ အဲဒီခွေးက ဘောလုံးတွေကို ဖောက်ပစ်မှာ။
ခင်ရတဲ့ မစ္စက် စတူးဝပ်ရေ…
ဧပရယ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ကျွန်မ သမီးကလေး ရိုစီ ရဲ့မွေးနေ့အကြောင်း စကားပြောချင်လို့ ရှင့်ဆီ ခုလေးပဲ ဖုန်းခေါ်တာ။ ရှင် အိမ်မှာ မရှိဘူးလေ။ ကိစ္စ မရှိပါဘူး ညနေလောက်ဖြစ်ဖြစ် ကျမ ထပ်လာခဲ့မယ်။ အဲ့ခါကျ စကားလေး ဘာလေးပြောကြတာပေါ့။
ကြည့်ရတာ ရိုစီလေး နဲ့ အဲလက်စ် တို့ ကြားမှ ပြဿနာ သေးသေးလေး တခုခုတော့ ရှိနေပြီထင်တယ်။ သူတို့ စကားမပြောကြဘဲကောက်နေကြတယ် လို့ကျမကတော့ ထင်တယ်။ ကျမတို့ တွေ့ကြတဲ့ အခါကျရင် သူတို့ ဘာဖြစ်နေကြတာလဲ ဆိုတာ ရှင်ကတော့ ပြောပြနိုင်မယ်ထင်တာပဲ။ ရိုစီရဲ့ မွေးနေ့ ကို အဲလက်စ် လာရင် ရိုစီ သိပ်ပျော်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ချစ်ခင်စရာ ကောင်းတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ မေမေကို တွေ့ဖို့ ကျမ မျှော်နေပါမယ့်။
နင့်ရဲ့ မွေးနေ့ပါတီကို နောက်အပတ်မှာ လာရရင် ငါပျော်မှာပဲ။ ငါ နဲ့ စန်ဒီ ကိုဖိတ်တဲ့ အသွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ နင့်မွေးနေ့ပါတီပွဲလေး အတွက် ကျေးစူး ပါ။ စန်ဒီက ဘောလုံးတွေကို ဖောက်ပစ် ပြီး နင့်ရဲ့ မွေးနေ့ ကိတ် ကိုစားပစ် တဲ့အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ သူ ဗိုက် ဆာနေတာ . . . ဖေဖေက ငါတို့ ရဲ့ ထမင်း ဟင်းအကျန်တွေကို အကုန်စားပစ်လိုက်လို့ လို့ မေမေက ပြောပါတယ်။
နင့်ကို မနက်ဖြန် ဂျောင်း မှာတွေ့မယ်နော်။
လက်ဆောင်အတွက်ကျေးဇူးပါ။ စန်ဒီ လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက်လဲကိစ္စမရှိပါဘူး။ မေမေက လည်း ကော်ဇောအသစ်လိုနေတာနဲ့အတော်ပဲလို့ပြောတယ်။ ဖေဖေ ကတော့ စိတ်နဲနဲ ဆိုးနေတယ်။ သူက ကော်ဇော အဟောင်းက အကောင်းကြီးရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်။ မေမေကတော့ တအိမ်လုံး အီအီး စော်တွေနံနေပြီတဲ့ ပြီးတော့ အဲ့တာ ကယ်ဗင်လေးကြောင့်လဲ မဟုတ်ဘူး လို့ ပြောတယ်။
မစ္စ ကေစီရဲ့ နှာခေါင်းကြီးကို ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ အဲ့တာ ငါတွေ့ဖူးသမျှ နှာခေါင်းတွေထဲမှာ အကြီးဆုံးပဲ။ ဟားဟားဟား။
ငါ သည့် တယ်။ သူ့ရဲ့ နှာခေါင်းကြီးက ဝက်နှုတ်သီးလိုပဲ တွဲကျနေတာ။ ငါတွေ့ဖူးသမျှ ဂြိုလ်သားတွေ ထဲမှာ ရုပ်အဆိုးဆုံးပဲ။ ငါတို့ရဲကိုအကြောင်းကြားသင့်တယ်။ ငါတို့ ဆရာတယောက်က ဂြိုလ်သားနဲ့တူပြီးတော့ ရုပ်ကလဲဆိုး၊ အနံ့ကလဲဆိုး…………..
မစ္စတာ နှင့် မစ္စက် စတူးဝပ်
အဲလက်စ် ရဲ့ ကျောင်းတွင်းအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်ပင်ဖို့အတွက် ကျမ ရှင်တို့နဲ့ အစည်းအဝေးတခုလောက်လုပ်ချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကတော့ ခုတလောမှာ ပြောင်းလဲလာတဲ့ သူ့ရဲ့အပြုအမူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်တာပါ။ အတန်းထဲမှာ ဆရာ စာသင်နေတုံး အတန်းဖော်နဲ့ အပြန်အလှန်စာရေးစကားပြောတတ်တဲ့ သူ့ရဲ့အကျင့်ဟာ ပြဿနာ ဖြစ်လာပါပြီ။ အဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့အတွက် အဆင်ပြေမယ့် အချိန်ကို ကျောင်းစာရေးနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ကျမနဲ့ အစည်းအဝေးလုပ်စေချင်ပါတယ်။
အတန်းထဲမှာ ငါတို့ တူတူမထိုင်ရတော့ဘူး။ ငါအရမ်းမုန်းတာပဲ။ ခုတော့ ငါ့မှာ အနံ့ဆိုးတဲ့ စတီဗင်နဲ့ ပိတ်မိနေပြီ။ သူက သူ့နှပ်ချေးဖတ်ကိုနှိုက်ပြီးတော့ ပြန်ပြန်စားနေတယ်။ သိပ်ရွံဖို့ကောင်းတာပဲ။ နင့်အဖေ နဲ့ အမေက မစ္စနှာခေါင်းကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာပြောသေးလဲ?
မေမေက ဘာမှတော့ သိပ်မပြောပါဘူး။ ရီ ပဲ ရီ နေတယ်။
ဘာလို့လဲတော့ ငါလဲမ သည့် ဘူး။ အတန်းရှေ့ဆုံးမှာ ထိုင်ရတာ တိတ် ပျင်းဖို့ ကောင်း သာ ပဲ။ ပါးစပ်နံတဲ့မစ္စ ကေစီ က ငါ့ကို တချိန်လုံး ကျီ့ နေပြီ။ နောက်မှနော်။
နင်အမြဲ သိ ကို စာလုံးပေါင်းမှားတယ်။ “သိ” ဟဲ့ “သည့်” မဟုတ်ဘူး။
စိတ်မရှိပါနဲ့ မယ်ပြည့်စုံရဲ့။ ဘယ်လိုပေါင်းရမယ်ဆိုတာ ငါကောင်းကောင်း သည့် ပါတယ်။
စပိန်ကနေ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီမှာ ရာသီဥတု က သိပ်သာယာတာပဲ။ ပူပြီးတော့ နေသာ နေတယ်။ ရေကူးကန်အကြီးကြီးနဲ့ ဒိုင်ဗင်စင်ကြီးလဲရှိတယ်။ သိပ်မိုက်တာပဲ။ ငါအခု ဂျွန်လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်လေးတယောက်နဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်နေတယ်။ သူက ခင်စရာကောင်းပါတယ်။ နောက် ၂ ပတ်ဆိုရင် နင့်ကိုပြန်တွေ့ရတော့မယ်နော်။ ငါ့လက် တဘက် ငါဒိုင်ဗင်ထိုးလိုက်တုံးက ကျိုးသွား တယ်။ ငါဆေးရုံသွားလိုက်ရသေးတယ်။ ငါ့လက်မောင်းကို ဆက်ပေးတဲ့ ဦးဦးလိုပဲ ငါလဲဆေးရုံထဲမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက ကုတ်အင်္ကျီအဖြူရောင်လဲဝတ်ထားတယ်။ လက်ထဲမှာလဲ လူနာကြည့်တဲ့ ဘုတ်ပြားနဲ့ ပြီးတော့ သူက သိပ်သဘောကောင်းပြီး ငါ့အပေါ်လဲ သိပ်ကြင်နာတာပဲ။ ငါလဲလူတွေအပေါ်ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ကုတ်အဖြူရောင်ဝတ်ပြီး အလုပ် လုပ်ချင်တယ်။ ငါ့သူငယ်ချင်း ဂျွန် က ငါ့ရဲ့ လက်မောင်းက ကျောက်ပတ်တီးပေါ်မှာ လက်မှတ်ထိုး ပေး ထားတယ်။ နင်လဲထိုးချင်ရင် ငါအိမ်ပြန်လာရင်ပေးထိုးမယ်လေ။
သို့ အဲလက်စ် လူဒင် ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ငါ့ဟိုတယ်က ပိုစ့်စကတ်က ပုံအတိုင်းပဲ။ ငါ့အခန်းကတော့ မြေပြင်ကနေ7up အတိုင်း ထောင့်ချိုးနားမှာရှိတော့ ပို့စကတ် ပုံထဲကနေ ငါ့နေတဲ့အခန်းကို နင်မြင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ငါကြီးလာရင် ဟိုတယ်ထဲမှာ အလုပ် လုပ်ချင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နေ့တိုင်း ချောကလက်တွေ အလကား စားရ တယ်လေ။
ပြီးတော့ ဟိုတယ်ကလူတွေကလဲ သိပ်ခင်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ နေ့တိုင်း နင့်အခန်းကို လာလာ ရှင်း ပေးတယ်။ ဒီမှာ ရှိတဲ့ ဘတ်စ် ကားတွေအကုန်လုံးက နင်မနှစ်က ခရစ်စမတ်မှာ ရတဲ့ အရုပ်အတိုင်းပဲ။ အနီရောင်ချည်းတွေ။ လူတွေစကားပြောတဲ့ အသံတွေက ရယ်ရတယ် ဒါပေမယ့် အရမ်း ခင်ဖို့ကောင်းကြတယ်။ ဂျိန်း လို့ခေါ်တဲ့ သူငယ်ချင်း တယောက် ရတယ်။ ငါတို့ နှစ်ယောက် ရေအတူတူသွားကူးကြတယ်။ ချစ်ခြင်းများဖြင့် မှ ရိုစီ။
နင့်ရဲ့ ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာ ဘာလို့ ငါ့ကို မဖိတ်တာလဲ။ အတန်းထဲက ကောင်လေးတွေ အကုန်သွားကြမှာ ငါသိတယ်။ နင် ငါ့ကိုစိတ်ကောက်နေတာလား?
အဲလက်စ် ရဲ့ အပြုအမူတွေအတွက် တောင်းပန်းပါတယ်။ ရိုစီလေးက မွေးနေ့ ကိုမလာရတဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းနေတာ တို့သိပါတယ်။ သူ့ကို ဘာလို့ မဖိတ်တာလဲ ဆိုတာကိုလဲ သူနားလည်ရှာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် တို့ကိုယ်တိုင်လဲ သိပ် နားမလည်ပါဘူး။ အဲလက်စ် ကို အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တို့ စကားပြောကြည့်ဖို့ ကြိုးစား ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးရဲ့ စိတ်ထဲကို တို့ ဝင်ကြည့် လို့ရနိုင်မယ်မထင်ဘူး။
တို့ထင်တာကတော့ သူက ရိုစီ့ ကိုမွေးနေ့ပွဲမဖိတ်နိုင်တာ တခြားကောင်လေးတွေက ဖိအားပေးလို့လို့ ထင်တာပဲ။ သူတို့တွေက မွေးနေ့ မှာ ကောင်မလေးတယောက်ရှိနေမှာ မလိုချင်ကြဘူးလေ။ ဆိုးတာက အဲလက်စ်ကလဲ အဲ့ဒီအသက်အရွယ်ကိုရောက်နေပြီလေ။ ……………
ရိုစီလေးကို ကျမနှုတ်ဆက်ကြောင်းပြောပေးပါ ။ သူမအတွက် မတရားပါဘူး အရင်တပတ် ကျောင်းဆင်းချိန် မှာတို့ ရိုစီလေးကို တွေ့တုံးက သူလေး ဘယ်လောက် ခံစား နေရတယ် ဆိုတာ တို့သိပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် နောက်အပတ် တညနေလောက် ဂျော့ခ်ျ နဲ့တို့ သူတို့နှစ်ယောက် ကို အပြင်ခေါ် သွားနိုင်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပါတီ ကပျော်စရာမကောင်းပါဘူး။ နင်မလာတာပဲကောင်းပါတယ်ဟာ။ ကောင်လေး တွေအကုန်က ငတုံးတွေပါ။ ဂျိမ်းစ် ရဲ့ အိပ်ယာ အိတ်ထဲကို ဘရိုင်ယမ်က ပီဇာတွေ ပစ်ထည့် ထားသေးတယ်။ အဲ့တော့ ဟိုကောင် ဂျိမ်းစ် နိူးလာတော့ သူ့ဆံပင်တွေမှာ ခရမ်းချဉ်သီး တွေ ကော၊ ချိစ်တွေကောပေပွနေတာပဲ။ မေမေက ဆေးပေးပါသေးတယ်။ မပြောင်ဘူးလေ။ ဂျိမ်းစ် အမေက ဘရိုင်ယမ့် အမေကို ဘာလဲမသိဘူးပြောလိုက်တာ ငါ့မေမေက တော်တော်ရှက် သွားတယ်လေ။ ပြီးတော့ ငါ့ ဖေဖေက ဘာလဲ မသိဘူးပြောလိုက်တာ ငါလဲကောင်းကောင်း မကြားလိုက်ဘူး။ အဲ့မှာ ဂျိမ်းစ် အမေက ငိုတော့တာပဲ။ နောက်တော့ အားလုံးကိုယ်စီ အိမ်ပြန် ကုန်ကြတာပေါ့။ သောကြာနေ့ကျရင် ရုပ်ရှင်သွားမကြည့်ချင်ဘူးလား ပြီးရင် ငါတို့ မက်ဒေါနယ် ကို ဆက်သွားကြမယ်လေ။ ဖေဖေနဲ့မေမေက ငါတို့ ကိုခေါ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်။
နင့်မွေးနေ့ပွဲအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲပြောပြော ဘရိုင်ယမ် က ကြောင် တောင်တောင် အကောင်ပါ။ငါတော့ သူ့ကိုမုန်းတယ်။ ဘရိုင်ယမ် ခိုကောင်ဆိုတာ သူ့ နာမည်ပေါ့။ ညည်းလွန်းလို့လေ။ ရုပ်ရှင် သွားဖို့ ဖေဖေ နဲ့ မေမေ့ ကိုခွင့်တောင်းကြည့်မယ် လေ။ မစ္စကေစီ ရဲ့စကပ်ကို ကြည့်လိုက်ပါအုံး။ ငါ့အဖွားတို့ခေတ်ကဟာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ရယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကြည့်ရတာ စန်ဒီ က သူ့စကပ်ပေါ်ကို အန်ချထားပြီးတော့………….
မစ္စတာ နှင့် မစ္စက် ဒွန်း
ရိုစီ ရဲ့ အတန်းထဲမှာ ဆရာ စာသင်နေတုံး အတန်းဖော်နဲ့ အပြန်အလှန်စာရေးစကား ပြောတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်ပင်ဖို့အတွက် ကျမ ရှင်တို့နဲ့ အစည်းအဝေးတခုလောက်ထိုင် ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက် လာမယ့် ကြာသပတေးနေ့ ညနေ ၃ နာရီ ဆိုရင်အဆင်ပြေနိုင်မလားရှင့်။
ဒီည ကို မေမေ နဲ့ ဖေဖေက ရုပ်ရှင်ကိုပေးမသွားဘူး။ နင့်ဘေးမှာ တူတူမထိုင်ရတာကို ငါမုန်း တယ်။ သိပ်ပျင်းဖို့ကောင်းတာပဲ။ ဆံလိမ် လစ်ဇီ ရဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက်လိုဆံပင်တွေ က ငါ့ရဲ့ ရှေ့ကနေ ကွယ်နေတော့ ကျောက်သင်ပုန်းကိုသေချာမမြင်ရဘူးဟ။ ဘာလို့ ငါတို့နှစ်ယောက် ကိုမှ ဒီလို ခဏခဏ ဖြစ်ရတာလဲမသိဘူးနော်။
ပျော်ရွှင်စရာ ချစ်သူများနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။ နင့်ဘဝထဲမှာ လိင်မှုကိုရရှိပြီး…………..ပြီးတော့…… လိင်မှုထဲမှာလဲ ဘဝကို ရရှိပါစေ။
ဟားဟားဟား သိပ်ရယ်ရတာပဲ။ နင်ဆိုတာ ငါ သည့် ပါတယ်။
နင်ဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာ ငါ လုံးဝနားမလည်တာပါ။ နင့်ကို ငါက ဘာလို့များ ချစ်သူများနေ့ ကဒ်ပေးရမှာလဲ? အံ့ပါ့ဟာ…..
ဟားဟားဟား…………..အဲ့တာ ချစ်သူများနေ့ ကဒ်ဆိုတာ နင်ဘယ်လို သည့် လဲ? နင် သည့် နိုင်တာ တနည်းပဲရှိတယ်။ အဲ့တာ နင်ကိုယ်တိုင် ပို့တဲ့ ကဒ်မို့လို့ပေါ့။ နင် ငါ့ကို ချစ် နေတယ်။ နင်ငါ့ကို လက်ထပ် ချင်နေတယ်။
အေးအေးနေစမ်းပါ။ ငါ့ကိုမနှောင့်ယှက်စမ်းပါနဲ့။ ငါဒီမှာ ဆရာမ မစ္စက် အို’ဆူလီဗန် ရဲ့ သင်ခန်းစာ ကို နားထောင်နေတယ်။ ငါတို့နှစ်ယောက် စာရွက်တွေနဲ့ စာအပြန်အလှန်ရေးနေတာကိုသူ မိသွားရင် ငါတို့နှစ်ကောင်တော့ သေပြီးသားပဲ။
နင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲ? နင့်ကြည့်ရတာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြောင်းလဲသွားလိုက်တာ ဘာမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။
ဟုတ်တာပေါ့….အဲလက်စ်ရယ်။ ငါက ဘဝမှာာ ခမ်းနားတဲ့ နေရာတွေ၊ ဌာနတွေကိုသွားမှာ။ ဥပမာ….ကောလိပ်တို့ဘာတို့တက်မယ်၊ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးသမား အနေနဲ့ ပိုက်ဆံတွေအများကြီး အပုံလိုက် ကြီးတွေ ပိုင်အုံးမှာ…… နင့်နဲ့တော့ ဘယ်တူပါ့မလဲ။
Labels: သက်တံ့ တွေရဲ့အဆုံးမှာ (ပေးစာများ)
khin oo may February 1, 2010 at 7:50 PM
အန်တီချမ်း February 1, 2010 at 10:31 PM
ငါအခုမှ ၇ နှစ်ပဲရှိသေးတာလေ
အခုမှ အခန်း ၁ ကို
အန်တီချမ်း February 1, 2010 at 10:32 PM
မနက်ဖြန်မွေးနေ့အတွက် ဒန့်ဒလွန်သီး ချဉ်ရည်ဟင်း ချက်ထားတယ်
SDL February 1, 2010 at 10:47 PM
7 နှစ်မှာ ရေးနေတာကိုး... တော်ထှာ ။
Bino February 2, 2010 at 12:35 AM
I had read slivers of your post patiently.
sweetpeony February 2, 2010 at 10:50 AM
တီရေ... တီရဲ့ epistolary novel တွေကို ဖတ်သွားတယ်....
အဲဒီ နိုဗယ်မျိုးကတော်တော် ခက်တာလို့ ပြောသံကြားဖူးတယ်....